Indray andro i Jesosy dia nampianatra tamin’ny Sabata. Ny Sabata dia andro iray fitsaharana ho an’ny Jiosy. Ny vehivavy hitanao eto dia narary be. Nandritra ny 18 taona izy dia nanjoko, ary tsy afaka nitraka. Dia nametraka ny tanany teo aminy i Jesosy, ary nanomboka nijoro izy. Sitrana izy!
Nahatonga ireo filoha ara-pivavahana ho tezitra izany. ‘Enina ny andro tokony hiasantsika’, hoy ny antsoantson’ny iray taminy tamin’ny vahoaka. ‘Ireo no andro azo anasitranana, fa tsy amin’ny Sabata!’
Nantsoin’i Jesosy ireo lehilahy jamba ary nanontaniany hoe: ‘Inona no tianareo hataoko aminareo?’ Hoy izy: ‘Tompo ô, aoka mba hampahiratina ny masonay.’ Nikasika ny mason’izy ireo i Jesosy, ary nahiratra avy hatrany izy ireo! Fantatrao ve ny antony nanaovan’i Jesosy ireny fahagagana mahatalanjona rehetra ireny? Satria tiany ny olona ary niriny ny hananan’izy ireny finoana azy. Ary araka izany, dia afaka matoky isika fa rehefa manapaka amin’ny maha Mpanjaka izy dia tsy hisy olona harary indray eto an-tany.
Hizara Hizara Nanasitrana ny Marary i Jesosy
my tant. 96